Somaliland” Maxkamad ayaan la tiigsaneynaa Ciyaartooy Muqdisho uga qeyb-galay…. | Banaadir Times
HomeUncategorisedSomaliland” Maxkamad ayaan la tiigsaneynaa Ciyaartooy Muqdisho uga qeyb-galay….
Somaliland” Maxkamad ayaan la tiigsaneynaa Ciyaartooy Muqdisho uga qeyb-galay….
Wasaaradda Dhalinyarada & Ciyaaraha Soomaaliland ayaa markii ugu horreeysay ka hadashay ciyaartoy ka socday degaannada Soomaaliland oo ka qeyb-galay tartankii kubbada Cagta ee dowlad goboleedyada & gobolka Banaadir oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Agaasimaha Waaxda Ciyaaraha ee Wasaaradda Dhalinyarada & Ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ceydiid Yaasiin ayaa sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan Ciyaartooydii ka tagtay degaannada Soomailand ee Muqdisho uga qeyb-galay tartankii dowlad Goboleedyada.
Waxaa uu sheegay in cidkasta oo Reer Soomaliland ah oo aan ku ciyaarin Magaca Reer Soomaliland uu yahay dambiile qaran dumis ah ilaa iyo inta uu cafis uga weeydiisanayo Madaxweynaha soomaaliland.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Hay’adaha Amniga Soomaaliland iyo Xeer ilaalinta ay u gudbiyeen Ciyaartooydaas, isla markaan markii ay dib ugu soo laabtaan degaannada soomaaliland ay Maxkamad la tiigsan doonaan.
Soomaaliland ayaa horay u xirtay dad ka yimid degaannadeeda oo Muqdisho u yimid siyaabo kala duwan, kuwaas oo u badan fanaaniin uu ku jiro fanaanka Qamar Suugaani.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Maanta dib u furtay waddo dhowr sano xirneyd